Kedu ihe ọrụ ndị nwere ike iwetara gị backlinks bara uru karịa?
Ọ bụrụ na ị mepụta mkpokọta ma chọọ inupụ ya na TOP nke engines ọchụchọ, ọ bụghị naanị na ị ga-emepụta ọdịnaya dị elu kama ị ga-elekwasị anya na mgbalị gị na usoro ụlọ ọrụ savvy njikọ.Ma ị ga-achọ ịnweta nanị backlinks azụmaahịa na saịtị gị, zụọ azụ backlinks gị ma ọ bụ nweta backlinks azụmaahịa, ịkwesịrị inwe atụmatụ ime atụmatụ. Ihe dị mkpa nke atụmatụ gị kwesịrị ịbụ ihe okike nke ọdịnaya. Ka ị na-enwekwu afọ ojuju ị na-ebipụta, ọ ga-enwe ike ịnweta njikọ ndị na-abata. Otú ọ dị, n'eziokwu, ọ gaghị enye gị nkwa na ị ga-emepụta ezigbo njikọ njikọ ụlọ. Tims, mgbe spammy, akara azụ azụ dị ala nwere ike itinye aka na mgbalị SEO ma bulie ọnọdụ saịtị gị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ, agakwaghị. Ebe ọ bụ na emelitere Google na ogo algorithm, spammy backlinks na-eme ka nsogbu karịa ka mma maka mgbasa ozi kachasị mma.N'oge a, nanị njirimara nke njikọ na-abata dị oke mkpa. Ebe ọ bụ na backlinks na-anọgide na-dị ịrịba ogo arụmọrụ, ị chọrọ imejuputa ịrụ ọrụ nke ọma njikọ ụlọ ọrụ gị na saịtị. Otu uzo iji jikọta ntule ụlọ na-adabere na ụdị mkpokọta ị nwere na nzube azụmahịa gị. N'agbanyeghị ebe ị na-eguzo, ọ dị mkpa iji oge na-amụtakwu banyere backlinks (backlink ngwaọrụ) nke e mere iji nyere gị aka ịmepụta ezigbo nsonaazụ maka nsụgharị search engine.
N'isiokwu a, ị ga-ahụ ụfọdụ ngwá ọrụ ọkachamara nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta ụlọ ọrụ njikọ njikọta ma melite mgbasa ozi gị.
Ngwá ọrụ ụlọ ọrụ njikọta
Steeti na-emepụta onwe ya
. E mepụtara ya maka ndị ahịa ahụ na-achọ ịntanetị bụ ndị ga-achọ ịnọgide na-enweta nkwado azụmazụ ọhụrụ dị ọhụrụ na-enweghị etinye ego dị ukwuu na nkwụsị njikwa kachasị elu. Ngwaọrụ a na-enye ndị ọrụ mgbagwoju anya nke ọrụ dị iche iche njikarịcha nke na-agụnye nyocha ọchụchọ, nchịkọta weebụ, nchọpụta weebụsaịtị, mmezi njehie weebụ, njikọ njikọ, melite ọkwa na nkwado ndị ahịa.Nchekwa onwe nke Semalt na-enyere aka inweta ihe njikọ njikọta sitere na ikikere ma dị mkpa na ebe nrụọrụ weebụ niche ahịa gị. Isi ha nwere ihe karịrị 50,000 ndị na-akwado ibe na saịtị dị iche iche, ọ bụ ya mere ngwá ọrụ a ga-eji gboo mkpa azụmahịa niile. Otu uru ọzọ nke ọrụ a bụ na ihe niile backlinks dị n'ime ihe dị mkpa ma dị mkpa nke nwekwara ike ịmepụta ya site n'aka ndị na-edepụta ihe na Semalt.A na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ nke ọma dị ka ntụsara ahụ si dị: 40% - njikọta arịlịka; 50% - njikọghị arịlịka; 10% - aha njirimara.
BackLinker bụ ngwá ọrụ nke na-akpaghị aka na-ewuli ọtụtụ puku backlinks dị elu maka ibe weebụ gị.Ngwá ọrụ a na-eweta njikọ ndị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama nke a ma ama nke a na-ejikarị na-achọpụta bots. E nwere abụọ dị nhọrọ ị nwere ike iji mee ka gị na saịtị - ịnweta weebụsaịtị (2500+ elu-backlinks) na premiom weebụsaịtị (100 adịchaghị mma backlinks).
Lelee My Links
A na-eji ngwá ọrụ a dị ka nchịkọta Google Chrome. Ọ bụ ya mere ọ dị mfe iji "Lelee Njikọ M" maka nyochaa njikarịcha nchọgharị gị. Ngwaọrụ a na-enye aka ịmepụta njikọ dị elu nke na-abata na enyemaka nke dochie njikọ ndị gbajiri agbawa na ibe weebụ. Ọ na-enye ohere ịnweta usoro site na ịrụ ọrụ dịka onye nlele backlink. Site na ndọtị a, ị nwere ike iji ngwa ngwa nyochaa ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla gbasara njikọta agbajiri Source .